ooVimba beXRPUSD-Funda ukuRhweba
Ixabiso leXRPUSD; Ukudibanisa ngaphakathi kwe- $ 0.49 kunye ne- $ 0.39 yamaNqanaba
Intengiso yeXRP / USD ngoFebruwari 08
Xa iinkunzi zenkomo zonyusa umfutho wazo, inqanaba leedola elingu-0.49 linokungena ngaphakathi kwaye i-0.62- $ 0.73 inqanaba inokufikelelwa. Kwimeko apho iibhere zizohlula iinkunzi zeenkomo, i-0.39 yeedola inokungena ngaphakathi kwaye kuvavanywe i $ 0.28- $ 0.21.
Amanqanaba okumelana: $ 0.49, $ 0.62, $ 0.73
I-XRPUSD inyusa kwitshathi yemihla ngemihla. Ixabiso lexabiso ngesiquphe elenzeka ngoFebruwari 01 lityhala ixabiso ukuvavanya inqanaba lokumelana ne- $ 0.62 ngaphambi kokuba ibuyele kwinqanaba le- $ 0.39. Kungekudala emva koko, ixabiso alizange lenze intshukumo ebalulekileyo. Ixabiso lidibanisa ngaphakathi kwe- $ 0.49 kunye ne- $ 0.39 yamanqanaba. Ngaphambi kokuvalwa kweemarike kwiveki ephelileyo, iibhere bezilawula.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngoFebruwari 08
Ixabiso lithengisa ngaphezulu kwee-EMA ezihamba ngokukhawuleza kunye nee-EMA ezihamba kancinci. Ezi zimbini zahlulwe kakuhle ezibonisa ukuba iinkunzi zibambe imarike. Xa iinkunzi zenkomo zonyusa umfutho wazo, inqanaba leedola i-0.49 linokungena ngaphakathi kwaye i-0.62- $ 0.73 inqanaba inokufikelelwa. Kwimeko apho iibhere zizohlula iinkunzi zeenkomo, i-0.39 yeedola inokungena ngaphakathi kwaye kuvavanywe i $ 0.28- $ 0.21. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-50 kunye nomgca womqondiso okhomba ezantsi ukubonisa intengiso yentengiso.
I-XRP / USD yeXesha eliPhakathi leTrend: Ukutshintsha
I-XRPUSD isusela kumbono wexesha eliphakathi. Umfutho wazo zombini iinkunzi zeenkomo 'kunye neebhere' zihlala zilingana kwitshathi yeeyure ezi-4 kwaye eso sisizathu sokuqhubeka kokudityaniswa kwamaxabiso kwinqanaba lexabiso le- $ 0.39. Le meko iqale kungekudala emva kokuhla kwexabiso ukusuka phezulu kwi- $ 0.62. Iibhere zatyhala ixabiso lokudiliza inqanaba le- $ 0.39 kwaye yaphulukana namandla.
Itshathi ye-XRPUSD yeeyure ezi-4, ngoFebruwari 08
Ii-EMA ezimbini zinxibelelene kwaye ixabiso liyahamba ngaphezulu kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA. Nangona kunjalo, isalathiso samandla esihlobo sexesha eli-14 ligobile phantsi komgangatho wama-50 ukubonisa ukuthengisa.
Ixabiso leXRPUSD; Iinkunzi zeenkomo zilungiselela ukunyuka phezulu
Ukuba iinkunzi zeenkomo zikwazile ukwandisa umfutho wazo kwaye zaphula inqanaba leedola le-0.39, emva koko, i-0.49 yeedola, i-0.62 yeedola iya kuba kukujolisa kokulandelayo. Ukuba ukunganyangeki kubambe i-0.39 yeedola, ixabiso lingaqhubeka nokudibanisa kwinqanaba le- $ 0.39. Nangona kunjalo, ngezantsi kwexabiso lentengiso langoku yi- $ 0.28, $ 0.21, kunye ne-0.17 yamanqanaba enkxaso.
Amanqanaba okumelana: $ 0.39, $ 0.49, $ 0.62
Amanqanaba enkxaso: $ 0.28, $ 0.21, $ 0.17
I-XRPUSD inyusa kwitshathi yemihla ngemihla. Xa i-Novemba ephezulu (i-0.73 yeedola) yafikelelwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, iibhere azinakho ukwamkela ukoyiswa, ziyiphendulile ngokuchaseneyo okubukhali kwaye ngequbuliso kwixabiso kwaye ikhandlela lemihla ngemihla lajika laba likhandlela elingaphezulu. Ixabiso labekwa ngaphantsi kwenqanaba langaphambili lenkxaso ye- $ 0.39 ngoFebruwari 01. Iinkunzi zizama ukwandisa umfutho wazo wokunyusa ixabiso.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngoFebruwari 03
Ii-EMA ezihamba ngokukhawuleza zihlala ngaphezulu kwe-EMA ezihamba kancinci ezahlulwe kakuhle kwaye ixabiso lithengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwentengiso yentengiso. Ukuba iinkunzi zeenkomo zikwazile ukwandisa umfutho wazo kwaye zaphula inqanaba leedola le-0.39, emva koko, i-0.49 yeedola, i-0.62 yeedola iya kuba kukujolisa kokulandelayo. Ukuba ukunganyangeki kubambe i-0.39 yeedola, ixabiso lingaqhubeka nokudibanisa kwinqanaba le- $ 0.39. Nangona kunjalo, ngezantsi kwexabiso lentengiso langoku yi- $ 0.28, $ 0.21, kunye ne-0.17 yamanqanaba enkxaso. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-50 kunye nomgca wesiginali okhombe phezulu ukubonisa intengiso yentengiso.
I-XRPUSD isusela kumbono wexesha eliphakathi. Ukukhula kweenkunzi kunye nokukhula kweebhere kuyalingana kwitshathi yeeyure ezi-4 kwaye eso sisizathu sokudityaniswa kwamaxabiso kwinqanaba lexabiso le- $ 0.39. Le meko iqale kungekudala emva kokuhla kwexabiso ukusuka phezulu kwi- $ 0.62. Iibhere zatyhala ixabiso lokudiliza inqanaba le- $ 0.39 kunye nokulahlekelwa ngamandla.
Itshathi ye-XRPUSD yeeyure ezi-4, ngoFebruwari 03
Ezi EMA zimbini zisondelelene kwaye ixabiso lithengisa ngaphantsi kwamaxesha ama-9 ama-EMA namaxesha angama-21 ee-EMA kuluhlu olusondeleyo. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 liyafana kwinqanaba lama-50 ukubonisa ukuba ukudityaniswa kuyaqhubeka.
Ixabiso leXRPUSD liBhuza kwiNqanaba eliPhakamileyo likaNovemba
Ukonyuka okungaphezulu koxinzelelo lweebhere kunokutyhala ixabiso lokungena kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.28 kwinqanaba; oku kungathoba ixabiso libe yi- $ 0.39 kunye ne- $ 0.28. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 0.28 linganiki ndlela, ixabiso linokunyuka liye kumaqondo aphezulu eedola 0.62, $ 0.73, kunye ne- $ 0.79. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-50 kunye nomgca womqondiso okhomba ezantsi ukubonisa intengiso yentengiso.
Amanqanaba okumelana: $ 0.62, $ 0.73, $ 0.79
Amanqanaba enkxaso: $ 0.49, $ 0.39, $ 0.28
I-XRPUSD i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Imakethi ibingazinzanga izolo njengoko iinkomo ziqale zongamela iibhere kwaye yiyo loo nto ixabiso linyuka liphezulu. Uxinzelelo lweenkunzi lwaphula i-0.39 yeedola, i-0.49 yeedola kunye nexabiso leedola le-0.62 kunye nenqanaba lokumelana ne- $ 0.73. Iibhere zichasene nokunyuka kwamaxabiso. Ixabiso lityhalelwa phantsi ngokwenziwa kwekhandlela lemihla ngemihla elide; Ixabiso lijolise kumgangatho ophantsi ongaphambili.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngoFebruwari 02
Ii-EMA ezimbini zahlulwe kakuhle kwaye ixabiso liyarhweba ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kufutshane njengophawu lwentengiso yentengiso. Ukonyuka okungaphezulu koxinzelelo lweebhere kunokutyhala ixabiso lokungena kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.28 kwinqanaba; oku kungathoba ixabiso libe yi- $ 0.39 kunye ne- $ 0.28. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 0.28 linganiki ndlela, ixabiso linokunyuka liye kumaqondo aphezulu eedola 0.62, $ 0.73, kunye ne- $ 0.79. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-50 kunye nomgca wesiginali okhomba ezantsi ukubonisa intengiso yentengiso.
I-XRPUSD i-bearish kwimbonakalo yexesha eliphakathi. Amandla eenkunzi zeenkomo ayephezulu kunalawo eenkomo 'kwitshathi yeeyure ezi-4 ekuqaleni kwentengiso yayizolo; Ixabiso liyakhula kakhulu kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.73. Iibhere zisabele kabukhali ngokuchasene nokwanda kwaye kukho ukuyilwa kwepini yebar. Yimodeli yekhandlela ye-bearish kwaye oku kubangela ukuhla kwexabiso ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphantsi kwinqanaba leedola le-0.28.
Itshathi ye-XRPUSD yeeyure ezi-4, ngoFebruwari 02
Ii-EMA ezimbini zingaphezulu kwexabiso okwangoku kwaye ixabiso lithengisa ngaphantsi kwamaxesha ama-9 ee-EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikhomba kwinqanaba lama-50 ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Ixabiso leXRPUSD: Iithwala igcwele ngaphezulu kweeBulls, inokuhla iye kwi-0.21 yeedola
Intengiso yeXRP / USD ngoJanuwari 28
Ukwanda koxinzelelo lweebhere kunokutyhala ixabiso lokungena kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.21 kwinqanaba; oku kunganciphisa ixabiso libe yi- $ 0.17 kunye ne- $ 0.10. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 0.21 linganiki ndlela, amaxabiso anokunyuka ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.28, $ 0.39, kunye ne- $ 0.49.
Amanqanaba okumelana: $ 0.28, $ 0.39, $ 0.49
Amanqanaba enkxaso: $ 0.21, $ 0.17, $ 0.10
I-XRPUSD i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Iibhere ziyazoyisa iinkunzi kwaye yiyo loo nto ixabiso lincipha kancinci. Uxinzelelo lweebhere luyanda ngokuthe chu ngokuchasene nentshukumo yeveki ephelileyo. Inqanaba lenkxaso le- $ 0.21 linokuvavanywa ziibhere.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngeyoMqungu 28
Ixabiso lithengisa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwentengiso ye-bearish. Ukwanda koxinzelelo lweebhere kunokutyhala ixabiso lokungena kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.21 kwinqanaba; oku kunganciphisa ixabiso libe yi- $ 0.17 kunye ne- $ 0.10. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 0.21 linganiki ndlela, amaxabiso anokunyuka ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.28, $ 0.39, kunye ne- $ 0.49. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 lingaphantsi kwamanqanaba angama-50 kunye nomgca womqondiso oguqa phantsi ukubonisa intengiso yentengiso.
I-XRPUSD i-bearish kwimbonakalo yexesha eliphakathi. Amandla ebhere abonakala ngathi aphakamile kunalawo eenkomo 'kwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso liyehla ngokuthe chu kwinqanaba lenkxaso ye- $ 0.21. Nangona ukungazinzi kuphantsi kwaye intshukumo iyonqena. Kukho amathuba okuba ixabiso liya kufikelela kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 0.21.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-XRPUSD, nge-28 kaJanuwari
Ii-EMA ezimbini zingaphezulu kwexabiso okwangoku kwaye ixabiso lithengisa ngaphantsi kwamaxesha ama-9 ee-EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA. Ixesha lesalathiso samandla xa kuthelekiswa ne-14 iyagoba ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Ixabiso leXRP / i-USD lihamba ngeenxa zonke kwi-0.28 yeeNqanaba zamaxabiso
Ukuhlaziywa: 24 January 2021
Intengiso yeXRP / USD ngoJanuwari 24
Ukwehla kwexabiso kwinqanaba le-0.28 yeedola kuyakwenza ukuba ingqekembe iqhubeke nokuma kwayo kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba le-0.21 yeedola enokuthi inyuke iye kwi-0.17 yeedola. Ukungena kwinqanaba eliphezulu le- $ 28 kuya kubangela ukuqhubeka kwendlela yokuqhubela phambili kwi-0.39, i-0.49 yeedola, kunye ne-0.62 yexabiso lexabiso.
I-XRP / i-USD yexesha elide: Ukutshintsha
I-XRPUSD ikwimo yokutshintsha kwetshathi yemihla ngemihla. Ukwenziwa kwepateni yekhandlela ye "bullish engulfing" ngoJanuwari 06 luphawu lokuba iinkunzi zeenkomo zikulungele ukuthatha indawo yentengiso. Iinkunzi ziqalise ukunyuka okuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.28- $ 0.29. Endleleni, iinkunzi zeenkomo zilahlekelwa ngamandla kwaye ukwanda kuthintelwe, ngokufanayo, uxinzelelo lweebhere alwanele ukuqhuba ingqekembe ecaleni, emva koko ixabiso liqala ukudityaniswa kwinqanaba leedola le-0.28.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngeyoMqungu 24
Amaxesha ama-9 ama-EMA kunye nama-21 amaxesha e-EMA asondela komnye nomnye kwaye umgama phakathi kwezi zimbini uya uncipha ngelixa ixabiso lihamba ngaphezulu kwezi zimbini. Ukwehla kwexabiso kwinqanaba le-0.28 yeedola kuyakwenza ukuba ingqekembe iqhubeke nokuma kwayo kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba le-0.21 yeedola enokuthi inyuke iye kwi-0.17 yeedola. Ukungena kwinqanaba eliphezulu le- $ 28 kuya kubangela ukuqhubeka kwendlela yokuqhubela phambili kwi-0.39, i-0.49 yeedola, kunye ne-0.62 yexabiso lexabiso.
I-XRP / i-USD yexesha eliphakathi eTrend: Ukutshintsha
Kwixesha eliphakathi, iXRPUSD iyahluka. Intshukumo ye-bullish eqale ngoJanuwari 06 ayinakho ukuqhubeka ngenxa yobuthathaka kumandla eenkomo. Uxinzelelo lweebhere lubuthathaka ngokulinganayo ngalo mzuzu kwitshathi yeeyure ezi-4. Ngamanye amagama, umfutho weeBulls kunye neeBhele ukwi-equilibrium.
I-XRPUSD itshathi yeeyure ezi-4, ngoJanuwari 24
Amaxesha ama-9 ama-EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA zinxibelelene kunye kwaye ixabiso liyathengisa ngaphezulu nangapha kwee-EMA ezimbini. Ixesha lesalathiso samandla esihambelanayo ne-14 sihambisa i-zigzag ebonisa ukungabikho komgaqo othile, oku kubonisa ukuba ukudityaniswa kuyaqhubeka kwimarike ye-XRP.
Ixabiso leXRPUSD liHlela kwinqanaba le- $ 0.28
Intengiso yeXRP / USD ngoJanuwari 20
Xa iinkunzi ziyonyusa uxinzelelo lwazo, inokutyhala ixabiso lokungena kwinqanaba lokumelana kwinqanaba le-0.39 yeedola; Ixabiso linokunyuka liye kwi-0.49 yeedola kunye ne-0.55 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 0.28 linika indawo, amaxabiso anokuhla aye kumanqanaba enkxaso ye- $ 0.21, $ 0.17.
Amanqanaba okumelana: $ 0.39, $ 0.49, $ 0.55
I-XRPUSD isusela kwitshathi yemihla ngemihla. Uxinzelelo lweebhere luya buthathaka kwaye inqanaba lenkxaso le- $ 0.28 alinakungeniswa ziibhere. Ngokunjalo, amandla eenkomo abuthathaka kakhulu ukuqhuba ingqekembe kwicala elingasentla. Ixabiso liyadityaniswa kwinqanaba lenkxaso le- $ 0.28. Ukuzama okwenziwe ziibhere ukungena kwinqanaba lokuxhasa kwicala elingaphantsi kuyasilela kwinkcaso evela kwiinkunzi.
Itshathi ye-XRPUSD Dialy, nge-20 kaJanuwari
Ixabiso lithengisa phakathi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 i-EMA isokola ukophula ukuhlangana kwinqanaba lokuxhasa le- $ 0.28. Xa iinkunzi ziyonyusa uxinzelelo lwazo, inokutyhala ixabiso lokungena kwinqanaba lokumelana kwinqanaba le-0.39 yeedola; Ixabiso linokunyuka liye kwi-0.49 yeedola kunye ne-0.55 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 0.28 linika indawo, amaxabiso anokuhla aye kumanqanaba enkxaso ye- $ 0.21, $ 0.17. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-50 kunye nomgca womqondiso ohambelana nenqanaba ukubonisa ukuthengisa okuthe kratya.
Kwixesha eliphakathi, iXRPUSD ikwimo yokutshintsha. Umfutho weebhere kunye nenkunzi yenkomo ihlala ikwinqanaba elilinganayo yiyo loo nto intshukumo yokudityaniswa kuqhubeka kwimarike yeXRPUSD kwitshathi yeeyure ezi-4. Namhlanje, iibhere zenze iinzame zokophula inqanaba lenkxaso le- $ 0.28 kodwa iinkunzi zenkomo zaphazamisa intshukumo kwaye iyaqhubeka isukela kwinqanaba leedola le-0.28.
I-XRPUSD itshathi yeeyure ezi-4, ngoJanuwari 20
Ii-EMA ezimbini zihlala zinxibelelene kwaye amaxabiso athengisa ngaphezulu kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esihlobo se-14 okwangoku asibonisi ulwalathiso oluthile lwentengiso.
Ixabiso leXRPUSD lizabalazela ukwahlukana nenqanaba le- $ 0.28
Ukuhlaziywa: 17 January 2021
Intengiso yeXRP / USD ngoJanuwari 17
Ukonyuka koxinzelelo lweenkunzi kunokutyhala ixabiso lokungena kwinqanaba lokumelana kwinqanaba leedola le-0.28; Ixabiso linokunyuka liye kwi-0.39 yeedola nakwi-0.49 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 0.28 liphethe, ixabiso linokubuyela umva kwaye amanqanaba enkxaso ye- $ 0.21, $ 0.17, kunye ne- $ 0.15 angavavanywa.
Amanqanaba enkxaso: $ 0.21, $ 0.17, 40.15
Iibhere azizukuvumela iXRPUSD ihambe, oko kuthetha ukuba iibhere zibambe ziqinile kwimarike yeXRP. Ixabiso lifikelele kwizantsi leedola i-0.21 nge-01 kaJanuwari kunye nokudityaniswa kweentsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba inyuke ngoxinzelelo lweenkunzi. Ixabiso laqhekeza inqanaba lama-40.28 elijolise kwi-0.39 yeedola. Iibhere ziphazamisekile kwaye ixabiso libuyela ngaphantsi kwenqanaba lexabiso le- $ 0.28.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngeyoMqungu 17
Ixabiso lithengiswa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA esokola ukuphelisa ukuhlangana kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.28. Ukonyuka koxinzelelo lweenkunzi kunokutyhala ixabiso lokungena kwinqanaba lokumelana kwinqanaba leedola le-0.28; Ixabiso linokunyuka liye kwi-0.39 yeedola nakwi-0.49 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 0.28 liphethe, ixabiso linokubuyela umva kwaye amanqanaba enkxaso ye- $ 0.21, $ 0.17, kunye ne- $ 0.15 angavavanywa. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 lingaphantsi kwamanqanaba angama-50 kunye nelayini yomqondiso ekhomba kwicala elingezantsi.
Kwixesha eliphakathi, iXRPUSD ikwimo yokutshintsha. Ingqekembe iqala elinye inqanaba lokudityaniswa emva kokuphuma kwenqanaba lokuqala lokudibanisa okwenzeke kwinqanaba le- $ 0.20 kunye ne- $ 0.25 yenqanaba. Ixabiso latyhalelwa phezulu ukuvavanya inqanaba lokuchasana le- $ 0.39 kodwa alikwazi ukufikelela kumanqaku ngaphambi kokuba libuyele umva kwakhona kwinqanaba le- $ 0.28. Iibhere azikwazanga ukungena kwinqanaba. Ingqekembe yaqala ukuhamba ngokujikeleza kwinqanaba lamaxabiso angama-40.28.
I-XRPUSD itshathi yeeyure ezi-4, ngoJanuwari 17
Ii-EMA ezimbini zinxibelelene kwaye ixabiso lithengiswa ngaphezulu nangamaxesha ali-9 ee-EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 licabalele kwinqanaba elingaphantsi kwamanqanaba angama-50 ukubonisa ukuthengisa okuthe ngqo.
Ixabiso leXRPUSD: $ 0.39 Inqanaba lokumelana liyabanjwa
Intengiso yeXRP / USD ngoJanuwari 13
Ukuba iinkunzi zenkomo ziyalonyusa uxinzelelo lwazo, ixabiso linokungena kwinqanaba lokumelana kwinqanaba le-0.39 yeedola; Ixabiso linokunyuka liye kwi-0.39 yeedola nakwi-0.62 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 0.39 liphethe, ixabiso linokujika kwaye amanqanaba enkxaso ye- $ 0.28, $ 0.21, kunye ne- $ 0.17 angavavanywa.
I-XRPUSD ifumene inkxaso kwinqanaba le-0.21 leedola; ayinakungena kwinqanaba lenkxaso ngenxa yesantya esibuthathaka. Iinkunzi nazo azinalo uxinzelelo olwaneleyo lokunyusa ixabiso, emva koko; Ixabiso liqala ukudityaniswa kwinqanaba lenkxaso elikhankanyiweyo. NgoJanuwari 07, iinkunzi zeenkomo zifumana uxinzelelo ngakumbi kwaye zityhala ingqekembe yokuphelisa inqanaba lokumelana ne-0.28 yeedola, amandla eenkomo kunye neebhere zaba buthathaka kwakhona kwaye zaqala ukudityaniswa de kube ngoku.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngoJanuwari 13
Ixabiso liyarhweba phakathi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kunzima ukuphelisa ukuhlangana kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.36. Ukuba iinkunzi zenkomo ziyalonyusa uxinzelelo lwazo, ixabiso linokungena kwinqanaba lokumelana kwinqanaba le-0.39 yeedola; Ixabiso linokunyuka liye kwi-0.39 yeedola nakwi-0.62 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 0.39 liphethe, ixabiso linokubuyela umva kwaye amanqanaba enkxaso ye- $ 0.28, $ 0.21, kunye ne- $ 0.17 angavavanywa. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 likuma-50 ngokuhambelana nenqanaba ukubonisa ukuba ukudityaniswa kuyaqhubeka.
Kwixesha eliphakathi, iXRPUSD ikwimo yokutshintsha. Emva kokuba ingqekembe iqhume kwinqanaba lokuqala lokudibanisa okwenzeka ngaphakathi kwenqanaba le- $ 0.20 kunye ne-0.25 yeedola, ukunyuka kwexabiso ukuvavanya inqanaba lokumelana ne- $ 0.39 kwaye ibuyele umva ukuze iphinde ibuye inqanaba le- $ 0.29 kodwa ingakwazi ukungena kwinqanaba. Ingqekembe yaqala ngokuhamba okuphakathi kwe- $ 0.39 kunye ne- $ 0.29 yamanqanaba amaxabiso.
I-XRPUSD itshathi yeeyure ezi-4, ngoJanuwari 13
Ii-EMA ezimbini zinxibelelene kwaye ixabiso lithengisa ngaphezulu nangamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 licabalele kwinqanaba lama-50 ukubonisa ukuthengisa okuthe ngqo.
I-XRPUSD iyasokola ukuphelisa ukuhlangana kwinqanaba le- $ 0.36
Ukuhlaziywa: 10 January 2021
Intengiso yeXRP / USD ngoJanuwari 10
Ukonyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi kunokungena kwinqanaba lokumelana kwinqanaba le-0.36 yeedola; Ixabiso linokunyuka liye kwi-0.39 yeedola nakwi-0.46 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 0.36 libambe, ixabiso linokubuyela umva kwaye amanqanaba enkxaso ye- $ 0.29, $ 0.20, kunye ne- $ 0.16 inokuvavanywa.
Amanqanaba okumelana: $ 0.36, $ 0.39, $ 0.46
Amanqanaba enkxaso: $ 0.29, $ 0.20, $ 0.16
I-XRPUSD ikwimo yokutshintsha kwetshathi yemihla ngemihla. Kwiintsuku ezintlanu ezidlulileyo, ingqekembe ibiboshwe ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.25 kunye nenqanaba lenkxaso le- $ 0.20. I-XRPUSD iqale intshukumo eqala ngoDisemba 30. Iinkunzi zeenkomo zafumana amandla okophula inqanaba lokumelana ne- $ 25 kwaye ixabiso latyhalelwa phezulu ukuvavanya inqanaba le- $ 0.32. Ixabiso liyadityaniswa kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.36.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngoJanuwari 10
Ingqekembe izabalaza ukwahlula ukudibana kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.36, amaxesha ama-9 ama-EMA angaphantsi kwamaxesha angama-21 e-EMA ngexabiso ngqo kumaxesha angama-21 e-EMA. Ukonyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi kunokungena kwinqanaba lokumelana kwinqanaba le-0.36 yeedola; Ixabiso linokunyuka liye kwi-0.39 yeedola nakwi-0.46 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 0.36 libambe, ixabiso linokubuyela umva kwaye amanqanaba enkxaso ye- $ 0.29, $ 0.20, kunye ne- $ 0.16 inokuvavanywa. Nangona kunjalo, ixabiso ligcina urhwebo lwayo ngaphezulu kwee-EMA ezimbini. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 likuma-50 ngokuhambelana nenqanaba ukubonisa ukuba ukudityaniswa kuyaqhubeka.
Kwixesha eliphakathi, iXRPUSD ikwimo yokutshintsha. Ingqekembe yaphuma kwinqanaba lokuqala lokudibanisa ngoJanuwari 07; Ukuhamba okujikelezayo bekuphakathi kwe- $ 0.20 kunye ne- $ 0.25 yenqanaba. Ixabiso liyonyuka ukuvavanya inqanaba lokuchasana le- $ 0.36 kwaye ubuyisele umva ukuphinda uzame inqanaba le- $ 0.29 kodwa ungabinako ukungena kwinqanaba. Ingqekembe yaqala ukuhamba okuphakathi kwe- $ 0.36 kunye ne- $ 0.29 yamanqanaba amaxabiso.
I-XRPUSD itshathi yeeyure ezi-4, ngoJanuwari 10
Ixabiso lithengisa ngaphakathi komndilili wokuhamba ngokukhawuleza kunye nomndilili wokuhamba kancinci. Amaxesha ali-9 ama-EMA namaxesha angama-21 ee-EMA asondele omnye komnye abonisa ukuba ukudityaniswa kuyaqhubeka. Nangona kunjalo, isalathiso samandla esihlobo sexesha eli-14 liyagoba kwinqanaba lama-50 ukubonisa uphawu lokuthengisa.